Shuruudaha Lagu Qoslo | allsanaag
Shuruudaha Lagu Qoslo
Ciidankii dhawaan doonayey ineey magaalada Muqdisho bililaqeeystaan, ayaa diidan in magaalada ay bannaanka uga baxaan. Wararka ayaa waxeey sheegayaan in lala kulmay Xasan Shiikh, balse qoladii ka socotay dawladda uu u sheegay in ciidankii ay qabiilka ku soo urursadeeyn ay kaga baxday lacag dhan laba milyan oo doolar.
Hadii buu yiri la doonayo in ciidanka magaalada laga saaro ay tahay marka hore lacagtaas in la soo bixiyo. Sidaa si la mid ah, Ca/raxmaan Cabdishakuur iyo Kheeyre ayaa iyaguna sheegay in ciidanka aan Muqdisho laga saareeyn illaa iyo inta la bixinayo lacag dhan seddex milyan oo doolar oo ciidanka bilililaqa doon lagu qarash gareeyey.
Waxaa soo socota in siyaasiyiint mooryaanta ah ay la yimaadaan wax kalle oo intaas ka sii qosol badan. Waxaa dhici karta ineey yiraahdaan tan iyo markii ay hooyadeeyn na dhashay wixii aan adduunka ku soo cunneenay oo dhan haddaan la soo bixin wax kalla soconayaa ma jiri doonaan.
Ergayga Midowga Yurub ayaa shalay sheegay in ciidanka laga saaro magaalada Muqdisho. Si kasta ha ahaato, waxaa muuqata nimankaa burburka iyo dagaalka u soo tafa xeeytay in aysan nabadgelyo rabin. Hadaba Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa looga fadhiyaa sidii uu ula dhaqmi lahaa siyaasiyiinta mooryaanta ah iyo ciidanka bililaqa doon sida uu ulla dhaqmayo.
← Bililiqo iyo Burburin Xal Ma’ahan Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo la kulmay saraakiil Maraykan ah →
2 thoughts on “Shuruudaha Lagu Qoslo”
Huruuse May 4, 2021 at 7:50 am
Waa sax ciidanku dhulkoodii ayay joogaan ini fargaajo isagaa xamar inan layaal ku ah oo ku jooga Saynab macalin ee boorsadiisa haka laalaabto intaan qoorta laga birayn. Ninkii dhoof ku yimi bay geeridu dhibaysaa
Jaamac May 4, 2021 at 8:20 am
Asc. Qoraalka meeshaan ku qoran maxaa loola jeedaa , ciidamadaan waxay meesha ku yimaadeen talaabooyinkii Farmaajo qaaday , kadib Farmaajo waxa uu sheegay waa ka noqday , halkaas markay marayso waxaa jira dad ladilay la dhaawacay Barakacay iyo dabcan maalbaxay , Farmaajo iyo Colkiisu in ay fidno wadanka Galiyaan kadibna Gacmaha ka mayrtaan maxay adiga kula tahay dhanka sharciga , aduunka waxa ka caadi ah in uu is casilo Ruuxaan oo kale kadibna maxkamad lasaaro marka hadii Farmaajo sii joogo iyo hadii Qolo kharashaad ka baxay sheegtaan meeshu waa soomaaliya.